Tsy ekena koa ity resaka hoe tsy andeha alavitra ny fiara, indrindra fa ny fiara fitaterana ka omena visite, nefa rehefa hivoaka ny faritra dia hoe averina indray ny visite, angaha misy visite locale sy visite technique nationale?
Mila manana politika fanavaozana ny fiara eto Madagasikara ny mpitondra, indrindra fa ireo fiara fitaterana, fa ampy ity fiara poubelle mandoto tontolo iainana sady tsy misy fiarovana ity, ampy ity taxibe seza hazo mitsingidina ity.
Misy azo atao tsy amoahan'ny fanjakana vola be, ny système bonus malus, izany hoe ireo fiara ratsy sy mandoto, mandoa vola ho an'ny fiara madio sy tsara.
Izany hoe mila fiaraha-miasa amin'ireo mpivarotra fiara, na fiara vaovao io, na ireo mpivarotra fiara occasion latsaky ny 10 taona, izay izy ireny koa mila atao matihanina, fa na ny toerana misy azy ireo aza dia eny an-tsenanomby, mibahana parking sy rond-point. Mila omena toerana izy ireny, eny, asa toy ny asa rehetra koa io, ka izy koa no tokony anofa toerana asiany ny fiarany amidy.
Ajanony ity maka hetra amin'ny fiara atao mutation ity, ahenao ny haba eny amin'ny douane, rehefa mbola tsy manana usine mpanamboatra fiara isika, dia ahenao ny vidin'ny fiara, fa fitaovam-piasana io, fa tsy aingitraingitra. Ny ranomanitra no asio haba, fa ny fiara aleo hiditra mora.
Ny Karenjy mila mandinika ny design sy ny chaîne de production, fa raha io asa tanana io hatrany, dia miandry Papa manaraka indray vao hisy ampiasa io fiara io.
Na eo aza ny fitiavan-tanindrazana, ny mpanjifa mila zavatra tsara endrika sy moderne, ka ny segment clientèle Karenjy amin'izao dia ampy azy amin'ny production vitany, fa raha entina hanavaozana ny parc auto eto Madagasikara dia mila ezaka hafa.
Azo jerena ny traikefa nataon'ny Chine, izay nividy ny ligne de production n'ny Mercedes sy BMW mihitsy izy. Ny motorisation nalainy ny technologie européenne, ny chassie, ny technologie américaine.
Fotoana izao ametrahana ny tena politique industrielle miompana amin'ny Métallurgie sy sidérurgie, fitrandrahana vy sy fanaovana vy, ny industrie lourde no mampandroso, fa tsy ny industrie textile fotsiny.
25% n'ny tanintsika dia misy vy avokoa, ka nahoana no ny hafa no manjakazaka eto amintsika.